विकासको भाइरस के हो ?::Hamro Koshi Awaj / awaz
विकासको भाइरस के हो ?
शक्ति पुजारीको अर्को चरित्र व्यक्ति पूजा हो । गणेश शैलीको यो चरित्रले मानिसलाई शक्तिको वरिपरि रम्ने र त्यसबाट फाइदा लिन सक्ने तुल्याउँछ । धेरै सिद्धान्तनिष्ठ नेताहरू पनि यही कारण कार्यकर्ता/मतदाता रिझाउने यस्तै प्रकृतिको चरित्र देखाउँछन् । यसले पद्धति र प्रणालीमा भाइरसको काम गर्छ र अन्ततः यसैको परिणति विकासका कार्यक्रमको गतिलाई सुस्त बनाएको छ । निर्वाचनपछि विजय हासिल गर्ने दल र व्यक्तिलाई बधाई दिन जसरी लर्को लागेको छ त्यसले उनीहरू त्यसबाट व्यक्तिगत लाभ लिन प्रयास पक्कै गर्नेछन् । शक्तिकेन्द्र धाएर आफूअनुकूल निर्णय गराएका धेरै घटना छन् । आगामी दिनमा पनि यस्तो प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउने निश्चित छ ।